Hety ambongadiny kely hety fiarovana amin'ny volom-bolo miaraka amin'ny toro-hevitra boribory ho an'ny mpanamboatra saka alika sy mpamatsy | Icool
Hety kely momba ny fiarovana ny volon'ny biby fiompy miaraka amin'ny tendrony boribory ho an'ny saka alika
Modely ： IC-45-2
Size: 4,5 santimetatra; 6.0inch
Endri-javatra: hety mahitsy miompy
● Ity hety ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 9CR, mafy sy mafy ny sisiny, izay afaka manapaka volo haingana, madio sy marina, nefa tsy misarika volo. Mety ho an'ny mpikarakara biby fiompy matihanina sy mpampiofana vao manomboka, safidy tsara koa izany raha te-manety ny alikanao ao an-trano ianao.
● hety 4.5 sy inch 6,0 santimetatra miaraka amin'ny torohevitra azo antoka azo antoka. Mampiasa visy avo lenta izahay mba hampifanaraka an'io hety io, izay mety amin'ny mpampiasa ny manamboatra ny teritery amin'ny hety. Azontsika atao ny mametaka ireo visy amin'ny loko hafa, toy ny volamena, mena na loko hafa ilainao. Izany dia hahatonga ny hety ho toa tsy manam-paharoa aminao.
● Ity hety mahitsy ity dia natao miaraka amin'ny tendron'ny vakana boribory. Mifanaraka tsara amin'ny tananao tsara io hety mahazatra io. Tonga lafatra amin'ny layering na amin'ny fomba fanjairana madio rehetra. Ity hety matihanina sy maranitra ity dia manana hodi-kazo matevina voamarina sy fehy ergonomika, izay afaka hahatonga ny hatsaranao ho haingana, ho mora ary mahomby kokoa. Ho fanampin'izany, ny tendrony penina boribory dia afaka miantoka ny fiarovana ny hatsaran-tarehy. Aza matahotra ny handratra ny tavan'ny biby fiompinao, ny masony, ny vavany, ny sofiny ary ireo faritra saro-pady mandritra ny fizotran'ny fikotranana.
4,5 santimetatra; 6inch
Hety Pet Staright Miaraka amin'ny Soso-kevitra Malalaka
Teo aloha: Hety alika hety alika fikolokoloana fiarovana hety
Manaraka: Gunting ho an'ny alika vy tsy miova vy ho an'ny alika
7.0 santimetatra avo lenta volony alika ho an'ny biby ...
Hety ho an'ny fikolokoloana biby mety amin'ny grooming biby ...